Wordpress - SMS ပေါင်းစည်းမှုပလပ်အင် | Martech Zone
စနေနေ့, စက်တင်ဘာလ 6, 2008 တနင်္ဂနွေ, ဒီဇင်ဘာလ 14, 2014 Douglas Karr
ငါလွန်ခဲ့သောအပတ်ကတိတ်ဆိတ်နေသည်ဟုသင်သတိပြုမိပေမည်။ ဒါဟာငါအလုပ်အတော်များများရှိခဲ့ပါတယ်အလုပ်မရှိခြင်းကနေမဟုတ်ပါဘူး အလုပ်များသောတစ်ပတ်!
ယခုအပတ်တွင်ကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သောပရောဂျက်တစ်ခုမှာ WordPress Plugin ဖြစ်ပြီးတိုက်ရိုက်ခွင့်ပြုသည် စာတို အတူပေါင်းစည်းမှု ဆက်သွယ်နိုင်သောမိုဘိုင်း။ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာမျက်နှာပြင်နှင့်စာရေးသူကြားခံနှစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သည်။ admin ရဲ့ interface ကသင့်ကိုပေါင်းစည်းမှုရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေကိုစီမံခွင့်ပေးတယ်။ စာရေးသူ၏မျက်နှာပြင်သည်သင်အသင်းဝင်များကိုထည့်သွင်းရန်နှင့်သင်၏စာသားကလပ်အသင်းဝင်များထံစာများပေးပို့ရန်ခွင့်ပြုသည်။
(ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်အတွက်) မှတ်ချက်များကိုစာရင်းသွင်းပါ။ အလိုအလျောက်ထွက်စစ်ထုတ် Akismet သည် spam များကိုသတ်မှတ်သည်!
ဘလော့ဂ်ပို့ရန်သတိပေးချက်များ (စာမူတစ်ခုထုတ်ဝေသည့်အခါသင့်စာပေးသူများကိုအကြောင်းကြားရန်၊ WordPress 2.6.1+ နှင့်သဟဇာတ)
URL ကို သုံး၍ အတိုကောက် is.gdသင်သည်သင်၏စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုထည့်သွင်းချင်သော
ဆက်သွယ်နိုင်သောမိုဘိုင်း အတော်လေးအားကောင်းတဲ့ရှိပါတယ် API ကို ငါအဲဒီမှာအာဒံနဲ့အတူအလုပ်လုပ်နေတာပါ။ ဒီ plugin ကိုညှိပြီးကောင်းမွန်တဲ့ပေါင်းစည်းမှုကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ပါ။ WordPress ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအတော်အတန်များပြားလာပြီးအီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေး၊ ဖောက်သည်အထောက်အပံ့သတိပေးချက်များ၊ အဖြစ်အပျက်များစီမံခန့်ခွဲမှုစသည့်များစွာသောအသုံးပြုမှုများအတွက်အသုံးပြုသည်။ SMS ဖြင့်စာရင်းသွင်းနိုင်ခြင်းသည်အလွန်ထူးခြားသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။
ငါတို့ဘလော့ဂ်မှာစမ်းသပ်မယ်။ အကယ်၍ သင်ပလပ်ဂင်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်၊ သူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်အာဒံနှင့်သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ blog post ကိုသေချာစွာပြောပါရစေ၊ ကျွန်ုပ်စာဖတ်သူများအတွက်အထူးလျှော့စျေးပေးရပါမည်။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးမည့်စမ်းသပ်မှုဘလော့ဂါများ (၀ န်ဆောင်မှုကိုယခုအခါအမေရိကန်အတွက်သာကန့်သတ်ထားသည်) ကိုထပ်မံထည့်သွင်းချင်ပါသည်။
၀ န်ဆောင်မှုသည်သယ်ဆောင်သူအားလုံးနှင့်အပြည့်အဝလိုက်ဖက်ပြီး၊ နှစ်ကြိမ်ရွေးချယ်ရန်နှင့်ရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်စရာများလိုအပ်သည်။ စာတိုပေးပို့ခြင်းဖြင့်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည် MartechLOG သို့ 71813။ စာတိုပို့ခြင်းအားဖြင့်သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည် MartechLOG ကိုရပ်ပါ သို့ 71813.
မှတ်စု: သင်၏လေယာဉ်တင်သင်္ဘောသည်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောဒေတာအခကြေးငွေများအတွက်သင့်အားကောက်ခံနိုင်သည့်စွဲချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်မရှိပါ။ ယခုပင်လျှင်လုံးဝ beta ဖြစ်နေသည် (SPAM မှတ်ချက်များအတွက်သတိပေးနေချိန်တွင်သင်စာရင်းသွင်းသင့်သည်။ )
Tags: wordpress smswordpress sms ပေါင်းစည်းမှုwordpress sms plugin ကို
6:2008 pm တွင်စက်တင်ဘာ 9, 07 မှာ
ဤသည်ဒေသခံအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကြောက်မက်ဘွယ်ကြည့်ရှုသည်။ ကော်ဖီဆိုင်မှာဘယ်လိုလက်ခံရရှိတယ်ဆိုတာကိုကြားချင်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းရှိစဉ်မှတ်ချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန် admin အတွက်ကောင်းသည်ဟုထင်သော်လည်းသင်၏အကြံဥာဏ်များက ပို၍ ဝေးသည်။
3:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 9, 44
မင်္ဂလာပါ၊ ဒီဟာတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ download link ဘယ်နေရာမှာမဆိုရှိပါသလား။
4:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 3, 45
ဒီပလပ်အင်သည်အကောင့်တစ်ခုလိုအပ်သည် ဆက်သွယ်နိုင်သောမိုဘိုင်း။ သင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်စမ်းသပ်မှုအချို့ပြုလုပ်လိုပါကသင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 'per post' option ကိုမကြာသေးမီက plugin တွင်ထည့်ပြီးပါပြီ။ ဗားရှင်း ၃.၂ ထွက်တော့မည်မဟုတ်ပါ
မေလ 3, 2016 မှာ 9: 56 AM
WP မှတ်ပုံတင်ခြင်း / လျှို့ဝှက်နံပါတ်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအီးမေးလ်၊ စကားဝှက်မှဖုန်း / OTP-password (sms မှပေးပို့သည်) သို့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသလား။
မေလ 3, 2016 မှာ 10: 23 AM